Ny rafi-pandrindrana fakantsary Mo-Sys no mamolavola ny fomba hahazoana filma vaovao mahomby - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny Rafitra Mo-Sys Camera Motion dia manamboatra ny lalana ho an'ny filmmaking filoham-pirenena bebe kokoa
Ny Rafitra Mo-Sys Camera Motion dia manamboatra ny lalana ho an'ny filmmaking filoham-pirenena bebe kokoa
Amin'ny maha-maso ara-pahitana, ny sarimihetsika dia mampiditra lafiny ara-teknika maro ao anaty rafi-pitondrany. Amin'ny ambaratonga fototra, ny fanaovana sarimihetsika dia mora tahaka ny fampiasana fakantsary antonony mba hahatonga ny sarimihetsika mahazatra an-trano izay raisina ho toy ny fanandramana aloha. Ankehitriny, ny sarimihetsika dia azo atao amin'ny teti-bola ambany miaraka amin'ny fakantsary nomerika mahazatra. Na izany aza, ny fampiasana ohatra toy ireo voalaza etsy ambony, araka ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny fahaiza-manao ara-teknika fahaiza-manao ara-teknolojia, dia miasa fotsiny amin'ny fanompoana fomba efa tranainy kokoa filmmaking. Ny haino aman-jery amin'ny sarimihetsika dia mbola mivoatra araka izay efa vitan'ny teknolojia hatreto amin'ny tsara indrindra rehefa manatsara ny fahitana ilay horonantsary teokratika dia afaka mamokatra.
Rehefa tonga ny sarimihetsika teknikan'ny teknolojia niampitana dia tsy azo isalasalana ny faritra mahaliana sy fanamby hoentina mandroso. Ireo faritra ireo, na dia tsy mampino aza, dia mitaky antsipirian'ny antsipirihany mba hahafahan'izy ireo ampiasaina tanteraka, ary mba hitrangan'izany ny teknolojia manohana azy ireo dia mila manome asa ilaina. Raha mijery horonantsary misy fiantraikany manokana miampita amin'ny faritany vaovao ianao dia afaka mahita ohatra toy ny Kapiteny America: The First mpamaly, Wall-E, ary Ny trangan'i Curie Benjamin, izay tsy afaka nampitombo fotsiny, fa namerina an-tsary ara-bakiteny ny endrika tena fakàna sary ho zavatra izay mihoatra noho ny fanjakan'ny mpamorona fitafiana na CGI mahavariana. Io izao Mo-Sys Camera Motion Systems dia tonga amin'ny sary amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fakan-tsary manaitaitra fatratra azy ireo sy ny fanatsarana ara-teknolojia isan-karazany nomen'izy ireo ho an'ny sarimihetsika isan-karazany tao anatin'ny folo taona lasa ary mitohy.
Ho an'ireo tsy zatra amin'ny asany, ny vokatra teknolojia fakantsary “Mo-Sys Camera Motion Systems” ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika sy ny fandefasana. Rehefa tonga ny karazan'entana ahafahan'ny ekipa sy ny fakan-tsary mampiavaka azy ireo, ny tanjon'izy ireo dia mifantoka indrindra amin'ny loha lavitra sy ny fanaraha-maso ny fihetsiketsehana, ny radio robotik, ny fanaraha-maso fakan-tsary sy ny optika ho an'ny AR, ny famokarana virtoaly ary VR, ary ny fakana sary an-tsary. Amin'ny teny tsotra kokoa, i Mo-Sys dia manohana ny teknolojia sarimihetsika ho fomba fanatsarana bebe kokoa ny sary saro-kenatra izay hitantsika amin'ny sarimihetsika amin'ny endriny miandalana indrindra fa mbola mahita ny tenantsika hoe manontany tena momba ny fomba namita izany.
Ohatra iray amin'ny asan'ny Mo-Sys dia misy ny sarimihetsika Gravity, ny 2013 Oscar Nominated Sci-Fi Epic tarihin'i Alfonso Curon, izay efa akaiky ny faha-6 taonany. Ny fandraisan'i Mo-Sys tamin'ny Gravity dia tonga tamin'ny fanohanana nomen'ny DP ilay sarimihetsika, Emmanuel 'Chivo' Lubezki miaraka amin'ny lohan'izy ireo lavitra, ny Lambda.
Ny modely farany an'ny Lambda, ny Mo-Sys Lambda 2.0, dia axis 110 Ib 2 / 3 izay manana endrika fanaraha-maso amin'ny fihetsiketsehana. Namboarina manokana ho an'ny fonosana fakan-tsary mavesatra be dia be, ary io no vokatry ny fomba famenoana ny takelaka fakantsary teleskopika, izay mamela fanovana haingana sy mora natao ho an'ny fatran'ny fatra fakantsary na dia an'ny 3D-stereoskopika aza. Ny Lambda 2.0 dia tonga miaraka amina fifehezana touchscreen izay manankery ihany koa ary mampiasa tanteraka ny mpampiasa interface tsara izay mahatonga ny fanovana ny fandaharana, ny firaketana ny hetsika ary ny famerenana azy ho haingana sy mora. Izay angon-drakitra rehetra dia azo raisina ary ampiasaina ho an'ny VFX.
Ny endri-javatra lehibe iray hafa an'ny Lambda, dia ny fahaizany mihetsika, amin'ny toe-javatra izay ilain'ny lohany roa-axis, dia azo havaozina mora foana amin'ny modely telo-axis misy axis roll 360˚. Ary raha toa ka mila ampiana ny fanamafisana Gyro, dia tsy hisy izany ivelan'ny fanjakany. Ny Lambda 2.0 dia manana fihemorana zero, izay midika fa tsy misy olana mihetsika, ary noho izany dia tsy mangina. Ny Lambda 2.0 dia manana fitaovam-pandrafetana manokana izay noporofoina ho azo itokisana sy matanjaka, nefa koa mahavita miatrika tontolo iainana mafana sy mangatsiaka izay mety handahorana hameperana sy hampihenjana ny fihetsehana mandritra ny fakana sarimihetsika iray izay mety tsy maintsy miantehitra amin'ny tontolo voalaza.
Rehefa mamantatra ny hetsiky ny fihetsehana fakan-tsary mihetsika, ny Lambda 2.0 dia mifanentana amin'ny sokajy. Ankehitriny, amin'ny resaka sarimihetsika toy ny Gravity, izay mitaky ny zanak'ondry efatra, dia nampiasaina hanohana ny Bot & Dolly, izay rigady fanaraha-maso mihetsika mahery vaika.
Tamin'ny fampiasana ireo Lambdas ireo dia nilaza i Emmanuel Lubezki fa, "Saika ny fitifirana rehetra dia namboarina tamin'ny lohan'ny fakantsary robotic avy amin'ny Mo-Sys," ary nampiasain'izy ireo ny lamosin-doha tsy misy dikany ary ny fahamailinana avo lenta dia fomba hampihenana ny aloka ao amin'ny tarehin'ny mpilalao mandritra ny tifitra sasany. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny Gravity Ny mpanao horonantsary sy Mo-Sys dia nanazava bebe kokoa ny mpiandraikitra ny VFX ilay mpanafika, Tim Webber, izay nanambara fa rehefa nihetsika ny fakantsary fa tsy ilay olona dia nihetsika manodidina ny marika izy ireo, raha niova avy amin'ny zoro haben'ny zoro habe ho lasa mafimafy kokoa fifampiresahana akaiky dia natao teo anelanelan'ny tarehin-tsoratra, sy ny mifamadika amin'izany. Tontosa segondra vitsy ny fanatanterahana izany fihirana izany, ary ny asa fakantsary tamin'ity tsikitsiky ity dia nitaky ny Lambda, izay mamela ny fakantsary handeha mivezivezy malalaka amin'ireo mpisehatra, ary tsy mametraka azy ireo amin'ny toerana tsy milamina satria omena sary sarotra ho an'ny sarimihetsika toa ny Gravity izay misy toetra iray mitsingevana fotsiny manodidina ny habakabaka mandritra ny adiny iray sy sasany amin'ny fotoana amin'ny efijery. Ny fihetsehan'ny sarimihetsika aseho amin'ny sarimihetsika izao dia azo antoka fa nalamina tamin'ny fampiasana choreographiara lehibe ary voarakitra ao anatiny Autodesk Maya ary taty aoriana nandritra ny famokarana nilalao an'i robot Bot & Dolly. Na izany aza, ny fanaraha-maso hatrany amin'ireto tarehin-javatra marobe ireto dia nohatsaraina bebe kokoa noho ny fiasan'ny zanak'ondry Lambda ary afaka manamboatra ho an'ny fakan-tsary mihetsika tena mora sy maimaimpoana.
Olli Kellmann, mpandraharahan'ny fanaraha-maso ilay sarimihetsika "Ireo zavatra ireo dia tsy maintsy hizaha toetra ary maro ny antony mety hanakorontana ny fihetsiketsehana tsy misy fiantraikany amin'ny fakantsary virtoaly ao anatin'ny tontolo CG. Toy ny tanjaky ny môtô, sy ny fiantraikany amin'ny haingam-pandeha sy ny hery manentana. ” Eo am-piatrehana ny zava-tsarotra atrehina, i Ollie sy ny mpiara-miasa aminy, Raul Rodriguez dia nanomboka nilalao ny hetsika efa voarakitra an-tsoratra miaraka amin'ny 10% ny hafaingany, ary avy eo dia nitombo hatramin'ny 100% izy ireo. Tamin'ny alàlan'ny fampilalaovana miadana, izy ireo dia nahay nanamboatra tariby hafa sy nanao fanitsiana isaky ny lohany nahatratra ny fetrany. Na izany aza, tsy nahitan'i Olli ny ankamaroan'ireny olana ireny nandritra ny fizotrany, raha toa ka be ny vola azon'izy ireo nomena, izay vao maika nohazavaina kokoa ny fiasan'ny lohan'ny Lambda.
Ny lohan'ondry Lambda dia nanome an'i Chivo ihany koa safidy amin'ny fampirimana sy ny famerenana ny hetsika efa noforonina mialoha izay ampiasaina amin'ny sarimihetsika. Ankehitriny, na dia efa voarakitra an-tsoratra mialoha aza ireo hetsika ireo, ny fahitana fa ny Lambda dia nanamora ny faharetana nandritry ny fizotran'ny fitifirana dia nanatsotra ny toe-javatra sasany toy ny fanamboarana ny toe-javatra iray, ny fanatsarana ny fihetsehan'ny fakantsary sasany, ary ny fotoana fanehoan-kevitra ilaina amin'ny lalao hetsiky ny mpisehatra. Ny choreography sy ny drafitra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia azo ampidirina ao anaty sehatra iray, fa ny fanetsiketsehana sy ny fiasana amin'ny fotoana tsy iasana dia ilaina ihany koa, izay hanatsara ny Lambda.
Michael Geissler, tompony & mpanorina, Mo-Sys Camera Motion Systems
Ny Lambda dia iray amin'ireo fahagagana ara-teknolojia maro be nomen'ny Mo-Sys ary mpamorona manan-tsaina sy tompony Michael Geissler, izay tao anatin'ny tafatafa 2017 nilaza hoe: “Solovavan'ny olana aho. Io no kely tiako, ” izay tena mamehy ny iraka fototry ny Mo-Sys. Ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fanatsarana ny teknolojia amin'ny singa ara-teknikan'ny filmmaking Ny fizotrany, izay tsy tsotra, ary miha sarotra kokoa rehefa mivoatra ny teknolojia, dia naneho ny fahaizan'izy ireo manome fihenjanana lehibe kokoa, fahamailoam-po ary tsy dia miverimberina toy ny fomba hialana toerana bebe kokoa mandritra ny filma ny sarimihetsika izay tsy miasa amin'ny wow fotsiny. mpihaino, fa miasa ihany koa hanome aingam-panahy ny mpanakanto manerana an'izao tontolo izao izay manana finiavana hiasa amin'ny sarimihetsika sy ny sary mihetsika.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Mo-Sys Camera Motion Systems dia afaka mitsidika azy ireo amin'ny Internet ianao www.mo-sys.com, na azonao zahana azy ireo ny Fampisehoana 2019 IBc any Amsterdam in Hall 6 - 6.C12 ary Hall 8 - 8.F21.
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie fampitana injeniera fampitana Engineering Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida fandraisana anjara Digital Nirvana HOAN'NY Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor IBC fanaraha-maso ny haino aman-jery SJGolden - Spears & Arrows Ny Fandikàna Seho THE COLONIE / Chicago Ultra HD Forum Variant Systems Video injeniera virtoaly zava-misy	2019-07-31
Previous: Ny trano famokarana voalohany any Saudi Arabia dia mampiditra an'i Baselight
Next: IBC2019 dia mahita vahaolana vita amin'ny rahona Simplestream izay manome antoka ny orinasan'ny haino aman-jery sy ny fialamboly hialoha ny làlan'ny teknolojia.